Go'aanka maxkamadda ICJ muxuu ka beddeli karaa xaalka Soomaaliya?
Tuesday October 12, 2021 - 12:53:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa maalmihii ugu dambeeyay aad loo dhawrayay xukunka maxkamadda caddaaladda ee loogu yeedho Heeg. Waa maxkamad ku taalla waddanka Netherland ama Holland taas oo la aas aasey 1945-kii. Kiiska miiska saarani waa kiiskii badda oo ay sannado dhawr ah
Waxaa maalmihii ugu dambeeyay aad loo dhawrayay xukunka maxkamadda caddaaladda ee loogu yeedho Heeg. Waa maxkamad ku taalla waddanka Netherland ama Holland taas oo la aas aasey 1945-kii. Kiiska miiska saarani waa kiiskii badda oo ay sannado dhawr ah isku hayeen Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Waddanka Kenya.
Waa su’aal laga yaabo in aaney dad badani isweydiinnin. Asalkaba Soomaalidu dhaqan uma ay lahayn markii hore in la isticmaalo wixii badda laga soo saaro. Waana laysku dhaliili jirey Kalluun dabashada, Jaamac Maxamed Qaalib oo ahaa madixii sirdoonka iyo amniga qaranka Soomaaliyeed intii u dhaxaysay 1962-1966 isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtey dawladdii millateriga ahayd ayaa buuggiisaa "Taariikhda Soomaalida” ku sheegay bogga 29aad in ay Soomaalidu leedahay xeeb dheer balse aaney u heellanaan jirin isticmaalka kalluunka kaddibna xukunkii askartu soo rogay in todobaadkiiba laba cisho aan lagu qali karin caasimadda Muqdisho xoolo si loo barto cunista kalluunka. Haddaba goof yar oo bad ah oo Kenya qaadatey maxaa sida intaa leeg loogu buunbuuniyey iyada oo la ogyahay in berrigii uu shisheeye haysto. Sow lama oga in Kenya hore u haysatey dhul Soomaaliyeed haddana haysato midkale oo Soomaaliyeed? Jubbooyinka iyo dhulalka kale ee dawladda Kiiniya haysataa ma Nayroobi bay ku yaallaan maxaa iyaga looga hadli waayey?.
Waxa la yidhi beri fog oo fog ayaa Shaydaan hooyadii jiid jiidey meel xanan iyo xanuun kulul. Dabeeto arrinkii baa dadkii wada ogaadeen. Garsoore wanaagsan oo ka garnaqa arrintaas baa la doondooney, garyaqaankii baa la soo helay. Maalintii loo ballansanaa dhegaysiga garta iyo ku dhawaaqidda xukunka ayaa garsoorihii yimid. Doodii la dhegaysay, waxa se fajiciso noqotey markii xukunkii qaadigu noqday sidan "Sheydaan waa yahay nin hooyadii meel daran jiid jiida habar sheydaanna runtii waa tahay wax la jiid jiido.” Halkaas bay arrintiina ku soo af meerantey.
Kenya in ay Soomaalida dhul ka qaaddey oo bad ka qaaddey haddana dhul kale ka haysato waa wax jira oo laga xumaado, run ahaantiina in Soomalida oo xukunkii alle ka jeesatey isla markaana qabiil iyo dimuquraadiyad daba ordaya wax sidoo loo galo waa yihiin. Bad yar oo ay helaanna xaqiiqada waxba ka bedeli mayso oo toodii hore ee faraha badnaydba meelna kuma oga ciidanna uma laha u ilaaliya. Sheekaduna wax ay ku soo koobantay halku dheggii Cabdale wadhafit goortii inta uu ka cararey Maxamed Siyaad Barre ee uu miciin bidey Cabdullaahi Yuusuf deetana uu ku hungoobey kolkaana dib ugu soo noqday Maxamed Siyaadkii uu ka ordey kaddibna ku qawlay "Ka tag talo xume, oo u tag talo xume, anna talo xume waa tabtaan ahay”.
Uhuru Kenyatta oo waxba kama jiraan kasoo qaaday go'aankii Maxkamadda ICJ.
Maxkamadda ICJ oo waxba kama jiraan kasoo qaadday sheegashadii Kenya ee Badda Soomaaliya.
Sheekh Xassaan Xuseen muxuu ka yiri guushii Taliban ay ka gaartay dalka Afghanistan [Video].
Dhageyso: Muxuu ka dhignaa dibad baxii shalay ka dhacay Koonfurta magaalada Gaalkacyo?
Guusha Daalibaan saamayn maku yeelan kartaa Jihaadka Soomaaliya?
Jihaadiyiinta Soomaaliya xilligan awood malagu muquunin karaa? (WQ: Dr. Keyse).
Waa Tuma Idaacadda Alfurqaan ee Mareykanku uu ku duqeeyay Soomaaliya? [Warbixin].
Daaw Video:Muslimiintu ma udabaal degi karaan Sanadka Cusub ee gaalada?
Saameyn intee le'eg ayuu dagaalka Itoobiya ku yeelan karaa Geeska Afrika [Warbixin] .
Warbixin+Video: Muxuu dagaalka Tigreegu u yahay go'aanka ugu halista badan ee uu gaaro Abiy Ahmed?